लिंगको अगाडि भागका बिमिरा
तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले लिंगको अगाडिको भागका बारेमा केही कुरा गरौं । लिंगको अगाडितिरको फुकेको भागलाई लिंगमुण्ड भनिन्छ । यही लिंगमुण्डको corona को पछितिर ससाना sebacious glands (छालामा भएका तैलीय पदार्थ निकाल्ने ससाना ग्रन्थि) हुन्छन्, जसलाई Tyson's glands भनिन्छ । तपाईंले भन्नुभएभन्दा यसको संख्या धेरै हुन्छ । यही ग्रन्थिबाट निस्कने तैलीय रस तथा छालाबाट झरेका कोषहरू जम्मा हुन गएमा त्यसैमा जीवाणुहरूको वृद्धि हुन्छ र सो सेतो पदार्थ बन्छ । यही सेतो पनिरजस्तो देखिने, एक प्रकारको गन्ध आउने पदार्थलाई smegma भनिन्छ । केही धार्मिक सम्प्रदाय, जस्तै कि हिन्दू सम्प्रदायमा लिंगको अग्रचर्म काट्ने चलन छैन, त्यसैले smegma चाँडो–चाँडो जम्मा हुन्छ । यो सेतो पदार्थ पुरुषमा मात्र होइन, महिलामा पनि पाइन्छ । महिलाहरूमा भने यो सानो भगोष्ठको मुनि तथा भगांकुरको मुण्डको वरिपरि पाइन्छ ।
के यसका लागि उपचार चाहिएला ?
पहिलो कुरा त यो सेतो पदार्थ स्वाभाविक रूपमा निस्कने कुरा हो र यसरी सेतो निस्किँदैमा हानि गर्दैन, तर यसलाई सफा नै नगरी धेरै जम्मा भएमा भने समस्या जन्माउन सक्छ । यसलाई सफा नगरिए यसको गन्ध प्रबल हुन्छ र त्यसले केही असजिलोपन ल्याउन सक्छ । अचेल बजारमा पाइने सुगन्ध छर्कने चलन चलेका बेला कतिपय प्राकृतिक गन्धलाई पनि नितान्त दुर्गन्धका रूपमा लिइन्छ । सायद गन्धका कारण यौनअंगलाई फोहर अंग ठान्नमा सहयोग गरेको छ । जे होस्, यौनांगको नियमित सरसफाइ गर्नुपर्छ ।
औषधीपछि पनि किन निको नभएको होला ?
तपाईंले चिकित्सकलाई जँचाई औषधीको प्रयोग गर्नुभएकाले के आशा गर्न सकिन्छ भने तपाईंको रोगको सही निदान र सोअनुसार नै सही उपचार भएको होला भन्ने विश्वास लिएको छु । तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको औषधी Cloben-G मा फङ्सलाई नष्ट गर्ने anti-fungal, antibiotics ​​​​​​​ तथा steroid छन् । यी तीनै प्रकारका तत्त्वयुक्त औषधी किन प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो भन्ने त परीक्षण गर्नुहुने चिकित्सकलाई पक्कै थाहा होला, तर उपचारपछि पनि किन निको भएन त भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा समस्याको निदान नै सही नहुनु र समस्याअनुसारको औषधी सही नहुनु वा सो भए पनि औषधीको सही तरिकाले प्रयोग नगर्नुजस्ता कुरा पर्छन् । अर्को कुरा, उपचार गर्नै नपर्ने कुरालाई उपचार गर्न खोज्दा पनि सो कम हुने स्थिति हुँदैन ।
तपाईंको लिंगमुण्डमा हुने बिमिराहरू सामान्य नै भएकाले उपचारको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले निको हुने भन्ने स्थिति आउने कुरा पनि भएन । त्यसैले अन्य कुनै लक्षण छैन भने मेरो विचारमा चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । शंका छ भने तपाईं यौनरोग विशेषज्ञको सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ ।